पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम शुरु - Chandragiri News
Home राष्ट्रिय पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम शुरु
२०७४, २५ फाल्गुन शुक्रबार १८:५५
नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन जडान गर्ने काम शुरु भएको छ।
सीमावर्ती शहर भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ३६.२०६ किमी लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन जोड्ने कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी लिखिया इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्राविधिकले पाइप जोड्ने काम शुरु गरेका छन्। १५ महिनाभित्र पाइपलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सिमरास्थित पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजनाले पाइप जोड्ने काम सकिएपछि जमीनमुनि पुर्ने काम गर्नेछन्। त्यसका लागि खाल्डो खन्ने यन्त्र भारतबाट ल्याउन लागिएको आयोजनाका प्रमुख शरदकुमार पौडेलले बताए। सो पाइपलाइन सिर्सिया नदीमुनिबाट लगिने बताइएको छ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको आइओसीले जनवरीदेखि वीरगञ्जमा पाइप आउन थालेको हो। प्रतिमहिना रु दुई लाख ३० हजारका दरले वीरगञ्जस्थित चिनी कारखानाको दुई बिघा जग्गा भाडामा लिएर भण्डारणस्थलमा सो पाइप भण्डारण गरिएको छ। पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्ने र चुहावट नियन्त्रणमा समेत रोकिने विश्वास परियोजनाले लिएको छ। पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको रु एक अर्ब ५० करोड छ वर्षसम्म बचत हुने बताइएको छ। यसले पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने तथा चोरी, चुहावट, मिसावट तथा ट्राफिक जामजस्ता समस्या हट्नेछन्।
Previous articleमास्कले नथेग्‍ने राजधानीको धुलो
Next articleके हो ‘होलबडी’ चेकअप ? के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस